Kenya oo hakisay Shidaal Baaris ay ka waday Biyaha lagu muransan yahay ee Soomaaliya – idalenews.com
Muqdisho(INO)- Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday inay laashay dhamaan wixii heshiis shidaal baaris ah ee ay la gashay Shirkadaha Shidaal baarista ka waday biyaha ay kula muran san tahay Somaliya.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Kenya, Githu Muigai,ayaa sheegay in ay hakiyeen dhamaan wixii Shidaal baaris ah oo ay horay u siiyeen Shirkadaha baara shidaalka si kalsooni loo siiyo Somaliya iyo Maxkamadda ICJ.
Dacwadda badda ee u dhaxeysay labada dal ayaa in la furayo iyo in kale dood la xiriirtay la soo afjaray Jimcihii la soo dhaafay,waxaana go’aan laga sugayaa Maxkamadda ICJ ee Dalkaasi Holland ku taalla.
Kenya waxa ay sheegtay in goobaha ay shidaal baaristaasi ka socotay oo ah 4 ceel hakad la geliyay kuwaas oo kala ah Ceelka 21-aad,22-aad 23-aad iyo 24-aad,kuwaas oo dhaca halka ay iska galaan biyaha labada dal sida ay sheegtay Kenya.
Kenya,ayaa wali ku doodeysa in is afgaradkii 2009-kii,kaas oo ay Dowladda Somaliya ku sheegtay in uusan ahayn mid dhaqan gal ama sharci hoggaamin kara heshiis ay gaaraan labada dal.
Kenya ayaa horay u sheegtay in haddii ay Somaliya kaga guuleysato kiiskan islamarkaana dhulbadeedkaasi laga celiyo oo lagu wareejiyo Somaliya ay taasi saameyn taban ku yeelan doonto Tanzania oo iyana ay sohdin badeed wadaagaan,islamarkaana jiro muran u dhaxeeya labadaasi Dal.
Baaxadda halka ay ku muransan yihiin Somaliya iyo Kenya ayey Dowladda Kenya ku sheegtay in 42,000KM ay gaareyso,taas oo ay rumeysan yihiin labada dalba in ay kheyraad dabiici ah ka buuxaan.
Xeer Ilaaliyaha Prof Muigai ,ayaa jeedintii ugu dambeysay ee Maxkamadda kaga codsaday in ay laasho dacwadda Soomaaliya ee ah in kiiskan ay Maxkamadda gasho,halka Soomaaliya ay ku doodday in Kiiskan uu ku habboon yahay Maxkamadda.
Ugu dambeynti, Muddo Sagaashan cisho gudahood ah ayaa Maxkamadda ICJ,laga sugayaa go’aanka ay ku caddeyneyso min Kiiskan ay qaadeyso iyo in aysan qaadeyn.
DFS oo ka digtay waxyeeleynta dhalinyarada ku xiran xabsiyada caalamka